China Jumbo Bag Belt webbing FIBC kitapo lehibe manapaka milina FIBC-6/8 orinasa sy mpanamboatra | VYT
Masinina manapaka lamba FIBC
Masinina fanapahana fehikibo FIBC
Masinina fanadiovana FIBC
Masinina manapaka ultrasonic
Masinina famehezana ny tavoahangy tavoahangy
Kitapo Lineran'ny fitoeran-javatra
Milina fanaovana kitapo vita amin'ny PP
Kitapo Jumbo mandeha ho azy Cleani ...
Jumbo Bag Belt webbing FIBC ...
FIBC PE Film Auto tavoahangy Sh ...
Jumbo Bag Belt webbing FIBC kitapo lehibe manapaka milina FIBC-6/8
FIBC kitapo lehibe fanapahana milina fanapahana milina miaraka scaling mandeha ho azy, mandeha ho azy dotting, ary mandeha ho azy fanapahana sy mandray servo maotera mba hifehy ny fanapahana halavany izay miavaka amin'ny hafainganam-pandeha avo, ambany lanina ary avo automation
FIBC - 6/8 Webbing Cutting Machine no fanavaozana ny FIBC - 4/6 Webbing Cutting Machine. Mihalehibe ny rindrina, mihalava ny roller fingotra ary ny roller voninkazo ary miova ny ampahany sasany.
Izy io dia afaka mahafeno ny fepetra takian'ny sakan'ny antsamotady 70mm-10 mm, ny tadin'ny 6-10 dia azo tapahina miaraka amin'ny fotoana iray ihany, ary ny sakany sy ny ambaratonga tery dia azo ahitsy amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny tsorakazo arakaraka ny bandwidth.
1. Ny fifehezana ny halavan'ny servo dia raisina, ny fametrahana ny masontsivana dia ampidirina mivantana amin'ny alàlan'ny interface-machine-human.
2. Solosaina indostrialy (PLC) dia ampiasaina hifehezana ny fiasa, ny tsindry faneriterena dia fehezin'ny valizy solenoid sy varingarina, miaraka amin'ny tsindry azo ovaina, fandidiana tsotra, tsy dia manary loha.
3. Fanamarihana sy fanapahana marina.
4. Fahombiazan'ny famokarana avo.
Ny sakan'ny fanapahana） mm）
Ny halavan'ny fanapahana (mm)
Manapaka mazava （mm）
Fahaizan'ny famokarana （Pc / min）
Halaviran'ny teboka (mm)
6Kg / cm3
fanaraha-maso ny mari-pana
1. VYT Loop fanapahana afaka manapaka ny halavany napetraka amin'ny fanapahana hafanana mandeha ho azy.
2. Ny pneumatika matanjaka ambony sy ambany manome antoka ny fampiharana amin'ny samy hafa.
fitaovana mitovy mitovy fanapahana halavany fanapahana.
3. Ny sakan'ny savily latsaky ny 7mm dia afaka manapaka kofehy 6 sy kofehy 8, ary ny antsamotady misy eo anelanelan'ny 10 -17mm dia afaka manapaka kofehy 4-8 miaraka amin'izay.
Izy io dia mety amin'ny fehikibo, kofehy, fehy, fehikibo famehezana, tady parachute, tarika pp, fehin-kibo fanapahana hatramin'ny halavany.
1. Fanosorana varingarina.
Raha ampiasaina mandritra ny fotoana maharitra ny varingarina, dia ho very ny tsiranoka fanosotra ao anaty varingarina.
Tadiavo ny mpampisaraka rano-menaka.
Akatona ny mpampisaraka ny rano misy menaka ary atosiho tanana ny valizy.
Vahao ny kaopy misy menaka, asio diloilo mety tsara ary apetaho amin'ny toerana voalohany. (menaka turbine 1 azo ampiasaina)
Fanamarihana: ny kaopy misy fantsakana misy rano amin'ny sisiny havia ary ny kaopy misy ny menaka eo ankavanana.
2. Milamina ny mpiray eo anelanelan'ny mitondra sy ny masinina.
Ampio matetika ny menaka fanosotra tsy tapaka.
Teo aloha: Masinina fanadiovana kitapo FIBC Jumbo ESP-A
Manaraka: Jumbo Bag FIBC Machine fanapahana lamba CSJ-2200
Milina fanetezana webbing mandeha ho azy
Masinina fanetezana kitapo lehibe Fibc
Fibc Sack Belt mandeha ho azy fanapahana milina
Masinina fanapahana fehikibo Fibc haingam-pandeha
LoopCUT webbing FIBC / kitapo lehibe fanapahana milina FI ...
1-1, zavamaniry atsimo, Zhangji Industrial Park, Distrikan'i Tongshan, tanànan'ny Xuzhou